Hiran State - News: Afhayeenka baarlamanka oo sheegay iney doorashadii dhaceyso bisha 8aad ka hor.
Afhayeenka baarlamanka oo sheegay iney doorashadii dhaceyso bisha 8aad ka hor.
Mogdisho:– Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aden oo maanta shir jara'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa daboolka ka qaaday inay doorashooyinku ay dhacayaan bisha July ee sannadkan, isagoo beesha calaamka ka codsaday in gacan lagu siiyo qabashada doorashooyinkaas oo ay hada diyaarinayaan gudiga doorashada.
Afhayeenka ayaa sheegay in xiligii lagu soo dhisayay dowlada dalka Jabuuti lagu heshiiyay in doorasho la qabto marka uu xilliga dowladaan dhamaado, wuxuuna ugu baaqay madaxda xukuumadda KMG ah inay ogolaadaan in doorasho la qabto danahooda siyaasadeedna halkas ka raadsadaan.
"Xalka dadka iyo dalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa in doorasho la qabto, maadaama uu xiligii dowladaan ku eg-yahay 20-ka bisha 8aad, waxaana inagu ka barlamaan ahaan qabnaa in doorasho la qabto si dalka iyo dadka loo bad baadiyo loogana baxo xiliga kumeel gaarka ah," ayuu yiri Shariif Xasan.
Afhayeenka baarlamaanka ayaa intaas ku daray inay diyaar u yihiin in heshiis laga gaaro khilaafaadyada ku aadan qaabka ay doorashadu u dhacayso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif inuu kaalin ka qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor ah si loo helo dowlad rasmi ah.
"Beesha Calaamka iyo madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan sidii ay gudaha dalka uga dhici lahayd doorasho," ayuu shirkiisa jaraa'id ku sheegay afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya.
Afhayeenku wuxuu soo dhaweeyay go'aankii Qarammada Midoobay ee ku ahaa sare u qaadista joogitaanka hay'adaha gargaarka ee Muqdisho iyo dalka intiisa kale. Isagoo sheegay in baarlamaanku uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay uga wakiilka ah Soomaaliya Mahiga.
Mar uu soo hadal qaaday afhayeenku hadal uu ka jeediyey golaha amaanka R/wasaare Farmaajo waxuu yiri
"Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku sheegay hadal uu ka jeediyay golaha ammaanka in baarlamaanka hada jira uusan dooran karin madaxda dalka, basle waxaa xusuusin mudan in mudo kororsiga baarlamaanka uu gaaray uu yahay talo soo jeedin ka timid IGAD iyo AU-da, taasoo ahayd in dalka laga badbaadiyo inuu meel cidlo ah kusoo dhaco," ayuu Shariif Xasan u sheegay mar u la hadlayey warfidiyeenada magaalda Mogdisho.
Intaa kaddib warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka oo warbaahinta loo akhriyay ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha ay xusuusinayaan in xafiiskiisa uu ku fadhiyo kalsooni uu siiyay baarlamaanka oo hooyo u ah hay'adaha dastuuriga. Ra'iisul wasaaraha waxaan ugu baaqaynaa inuu joojiyo xadgudubyda iyo meel ka dhacyada joogtada ah ee ay xukuumaddiisu kula kacayso baarlamaanka. iyadoo loogu baaqay in hay'adaha kala duwan ee dastuurka in la ixtiraamo kala soocnaanta awoodaha hay'adaha dastuuriga ah, loona daayo hay'ad walba shaqadeeda si loo helo wadashaqeyn looga gudbo marxaladda adag ee uu dalku ku jiro aya warbixint lagu yiri.
R/wasaaraha Somaliya oo hada ku mashquulsan xalinta qilaaf jifo hoosaadka uu ka soo jeedo soo kala dhex galay kedib markii uu xabsiga dhigay Xildhibaan Bare Hiiraale ayaa isagu siyaasadiisa arimaha dibada ay wax badan hoos u dhacday kedib markii si aan caadi aheyn loogu bah dilay shirkii golaha amaanka ee qaramada midoobay.
Muwadin Somaliyeed oo magaciisa ku sheegay Saalax ayaa yiri lama yaabani inuu dalkeenii hooyo bur buray. lamana yaabin waqtigii dheeraa ee hogaamiye kooxeedyada. laakinse waxaan la yaabay ayuu yiri sida R/wasaaraha Somaliya loogu soo dhaweeyey xarunta QM shirkii dhawaantan ka dhacay oo isagoo R/wasaare Somaliyeed ah sidii shaqsi caadi ah loo qaabilay taasina waxey meel ka dhac ku tahay madax banaanideena isagoo ku booriyey madaxweynaha iyo Mr Farmaajo iney siyaasada ay hada ku socdaan wax badan ka bedelaan ayuu yiri.
Dabcan dadka siyaasada Somaliya u guur gala waxey leeyahiin Farmaajo ma garan waayin in wadankiisu ay doorasho ka dhacdo oo laga baxo kumeel gaarka ee waxey leeyahiin beesha caalamka ayaa hogaamiyaashii Somaliya soo maray xiligii kumeel gaarka bareen lacag iyo deganaansho horey loo sii siiyo si ay guriga ay shacabkooda u matelaan looga qaado.
Bal dib u jaleec inta siyaasiyiin, mudane baarlamaan, beesha caalamka, waxgarad ugu baaqday madaxweynaha iyo R/wasaare Farmaajo in ay dalka ka dhacdo
doorasho xor ah.
1- Midowga Yurub oo ah dowladaha biila ciidamda Africanka ah ee ilaalada ka haya Farmaajo iyo madaxweynah Soamliya waxey ka dhawaajiyeen in hadii aysan Soamliya doorasho ka dhacin ay joojin doonaan dhaqaalaha ay siinayaan dowlda Somaliya ciidamdooda iyo kuwa Africa.
2- Qaramada Midoobay oo ah kuwii ku soo dhisay dowlada hada jirta dalkaasi Jabouti waxey ku baaqeen in si deg deg ah ay doorashu u dhacdo.
3- Goalaha baarlamaanka Somaliya oo ah hay'addii sharciyeysay amaba dooratay madaxweynaha Somaliya kedibna ansaxiyeen xukumada Farmaajo waxey isku diyaarinayaan iney soo doortaan hogaamiye cusub.
4-Siyaasiyiinta Somalieed ee ugu baaqay iney wadanka doorasho ka dhacdo waxa ka mid ahaa madaxweynahii hore ee Somaliya Cabdullaahi Yusuf Ahmed. R/wasaarahii hore Cumar A/rashiid iyo qaar kamid ahaa maamul goboleedyada dalka ka jira oo ay ugu horeyso Puntland.
5- Somalida qurbaha oo shirar lagu taageerayo TFGda horey u abaabuli jiray hada warkaasi meel ayey iska dhigeen waxeyna ku mashquulsan yahiin sidii ay degaankasta ugu sameysan lahaayeen maamul goboleed.
Hadaba R/wasaare Farmaajo iyo madaxweynaha Shariif waxaa u haray hada iney odoyaasha beelaha Hawiye oo hada isku bedelay siyaasiyiin ay maalmaha soo socda idaacadaha ka hadlisiiyaan iyagoo dhaleecynayo qaar masuuliyiinta dowlada ka tirsan sida inta badan lagu yaqaano dadka siyaasada koofurta Somaliya ku fashilma dhaqanadooda.
Abwaankii Somalieed waxuu yiri shacbigaan qabuuraha u batay ee qalalan ee hiigan anigaa xilka u qaban iyo anigaa u qaban hadii leysku qaaquuray oo qalfooftiisii lagu tartami waa qisadu saase. waxa aan qalbiga ugu ooyayaa aaway qarankii ayaa ka mid ahaa gabay uu horaantii 1993kii ka jeediyey shirkii Somalida dalka Ethiopia abwaan Mustafe.
· admin on May 16 2011 13:59:52 · 0 Comments · 1729 Reads ·
14,599,755 unique visits